DOWNLOAD Ị HỌRỌ Ọ KACHASỊ ỌHỤRỤ - MMEMME NYOCHA - 2019
Ị Họrọ Ya 1.9.2
Ịmepụta mkpesa gbasara ụfọdụ ụdị ọha na eze na netwọk mmekọrịta bụ VKontakte bụ usoro yiri usoro yiri nke ahụ, ma ọ bụ naanị na onye ọrụ. Ọzọkwa, site na mkpesa dị otú ahụ, ị ​​nwekwara ike ime ka o nwekwuo ohere nke igbochi obodo ma ọ bụ wepụ ihe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ụdị nkwurịta okwu na nkwado aka na ụzọ ziri ezi.
Na n'ozuzu, usoro dum adịghị ewe oge buru ibu ma mejuputa ịrụ ọrụ dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịwụgharị. Nsogbu, n'ime usoro nke ịmepụta akụkọ banyere imebi ọha na eze, ekwesịghị ibili ọbụna n'etiti ndị na-amalite na netwọk mmekọrịta a.
Anyị na-eme mkpesa banyere ìgwè VKontakte
Ruo ugbu a, ụzọ dị mkpa ị ga-esi mee mkpesa megide obodo bụ iji ụdị mmeghachi azụ na nkwado akaaka. Nke ahụ bụ, ndị ọrụ anaghị enye ụdị ntanetị, ekele nke ị nwere ike iji mkpesa ole na ole na-eme mkpesa, dịka a na-enye ya na ọkwa nke ndị mmadụ.
A ga-atụle mkpesa nke otu ma nwee afọ ojuju ma ọ bụrụ na i nwere arụmụka bara uru. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọtụtụ ndị ọha na eze bụ mkpụrụ nke ogologo oge nke otu ma ọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụghịkwa mkpa ndị nlekọta ka ọ dị mkpa.
Naanị mgbe ị nwetasịrị ihe àmà nke ikpe ọmụma nke otu ma ọ bụ obodo, ị nwere ike ịmalite ịmepụta mkpesa.
Hụkwa: Otu esi eme mkpesa na onye ọrụ na VK
Nkwado nkwado kọntaktị
Iji mee ka ozi gị mara nke ọma, ọ ga-adị mkpa ịnye ụfọdụ data metụtara ọha na eze. Tụkwasị na nke ahụ, akwụkwọ nke ị na-arịọ maka enyemaka ndị teknụzụ kwesịrị ịkpali obi ike na ndị ọkachamara.
Edebanyela aha ederede di iche iche maka maka ịmepụta ezigbo mkpesa maka nchịkwa.
A na-atụ aro ka ị mee mkpesa dịka ụkpụrụ na-esonụ.
Mbụ, na-egosi ihe kacha mkpa nke mkpesa ahụ.
Adreesị nke obodo ahụ ebubo.
Nkowa zuru ezu nke ihe mere eji edepụta mkpesa na echiche nke okwu nke aka ha.
Ihe akaebe nke ikpe ọmụma obodo, n'ụzọ kwekọrọ na mmebi ahụ a kọwara na ederede.
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmepụta njikọ maka ndị isi ụlọ, ma ọ bụrụ na ọ bụ omume ha bụ ihe kpatara mkpesa nye obodo dum.
Na usoro nke ịmepụta tiketi maka ọrụ nkwado ọrụ nke VKontakte, gbasoro okwu mkparịta ụka, n'enweghị mkparị na okwu rụrụ arụ. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ ịmepụta mkpesa kpamkpam n'enweghị nsụgharị na nsuso.
Leekwa: Otu esi dee na nkwado VKontakte
Echefula, ọ bụ ndị ọkachamara dị ndụ ka ị ga-esi na-akpọtụrụ ndị mmadụ niile, ma ọ bụ naanị mgbe ị na-ekepụta arịrịọ ziri ezi ị ga-emezu ihe mgbaru ọsọ gị. Anyị na-achọ ka ị kacha mma.